नेपालमा पठन संस्कृतिको विकासबारे एक दिने गोष्ठी सम्पन्न
काठमाडौं । अनलाइन अर्डर मार्फत पाठकको घर–दैलोमा किताब पु¥याउँदै आएको ‘किताब यात्रा’ले शुक्रबार आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा एक दिवसीय गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । ‘नेपालमा पठन संस्कृतिः हिजो, आज र भोली’ शीर्षकको सो गोष्ठीको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्रनाथ खनाल, प्राध्यापक डा. अभि सुवेदी, उपन्यासकार बुद्धिसागर र अभिनेतृ ऋचा शर्मासँग रुपेश श्रेष्ठले नेपालमा पठन संस्कृतिबारे संवाद गरेका थिए ।
सो संवादमा वक्ताहरुले पुस्तकको सहज पहुँच र चेतना विस्तार सँगै पाठकहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको धारणा राखे । पाठकको रुचीमा विविधता थपिएसँगै नेपाली साहित्य पनि समृद्ध हुँदै गएकोमा वक्ताहरु एकमत थिए । विगतको तुलनामा पठन संस्कृति बढिरहेको भए पनि अपेक्षित रुपमा भने निर्माण नभइसकेको प्रति वक्ताहरुको गुनासो थियो ।
प्रा.डा. सुवेदीले पछिल्लो समय पुस्तक र साइबर संस्कारबीच द्वन्द्व रहेको उल्लेख गरे।उनले भने, ‘हिजोभन्दा आज पुस्तक पढ्ने अझ किनेरै पढ्ने जमात बढेको छ। तर, साइबर संसारप्रति युवाहरुको आकर्षण बढेकाले यसले भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरामा पनि विमर्ष हुनु आवश्यक छ।’
मदनकुमार भट्टराईको ‘परराष्ट्रका पात्र’ पुस्तक सार्वजनिक
काठमाडौँ । आवासीय विद्यालय, ‘मिशन स्कूल’ र विदेशमा पढेका प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाउँदै गाउँको सामान्य विद्यालयमा पढेको एउटा ठिटो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जानकार कसरी भयो ? परराष्ट्र सचिव, जापान र जर्मनीको राजदूत अनि
कर्णालीका कारागारमा किताब अभियान
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा रहेका कारागारमा प्रदेश सरकारले ‘कारागारमा किताब अभियान’ शुरु गरेको छ । उक्त अभियानको आज मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले शुभारम्भ गरेका छन् । सो अभियानको शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री
सामसुङ ग्यालेक्सी फोल्ड : किताबजसरी मोडिने स्मार्टफोन
दक्षिण कोरिया । सन् २००९ मा आफ्नो पहिलो स्मार्टफोन बजारमा ल्याएपछि सामसुङले विश्वमा नयाँ प्रविधिको सुरुवात गर्यो । यसको निरन्तरतास्वरूप बिहीवार कम्पनीले सामसुङ ग्यालेक्सी फोल्ड नामक आफ्नो पहिलो फोल्ड हुने
किताबखानामा अद्यावधिक नभएका कर्मचारीले समायोजनका लागि फाराम भर्न पाउने
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती किताबखानामा अद्यावधिक नभएका कर्मचारी पनि समायोजनका लागि फाराम भर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समायोनजका लागि फाराम भर्न दुई दिनमात्र बाँकी रहँदा